Xasuuqii Wardheer iyo Xiisaha Taariikhda Febraayo – Rasaasa News
Bisha Febaraayo waxaa jira maalmo taariikhada Ogadeeniya xusuus gaar ah u leh. Bishan gudaheeda waxaa dhacay dhacdooyin waawayn oo taariikhda Ogaadenya ku reebay xasuus aan la iloobi karin. Maalmahaas qaar waxay leeyihiin murugo iyo qaarna farxad.
Qormadan waxaan si kooban ugu soo qaadanaynaa qaar ka mid ah dhacdooyinka ku jira bisha Fabraayo.
01 Febraayo sanadkii 1994 waxay Ciidamada Gumaysiga Itoobiya si waxashnimo ah ugu dileen magaalada Qalaafe Marxuum Duulane Xasan Gaabane oo ahaa gudoomiyihii dagmada Qalaafe iyo Laba ruux oo shacab ah oo la kala odhan jiray Cabdi Cali Aadan iyo Diiriye Dhaqane.
06 Febraayo, 1994 waxay sidoo kale Ciidamada Gumaysiga Itoobiya magaalada Wardheer ku dileen gudoomiye ku xigeenkii magaalada Wardheer Marxuum Cabdulaahi Ibraahim Yuusuf (Abdullahi Ganey). Marxuum Cabdullahi Ganey wuxuu horistaagay qorshayaal ay Itoobiya ku doonaysay inay ku khayaamayso shacbiga. Mid ka mid ah qorshayaashaas wuxuu ahaa shir ay dawladdu doonaysay inay isugu yeedho odayaasha iyo dadwaynaha laguna qasbo inay taageraan mawqifka dawladda oo ahaa in shacbku saxiixaan in ay rabaan Itoobiya, meesha ay Jwxo codsatay in afti laga qaado shacabka.
07 Febraayo, 1994 Odoyaasha iyo Ugaasyada gobolku waxay u gudbiyeen xukuumadii Meles Zenawi shir uu kula yeeshay Godey in ay doonayaan in Afti laga qaado dadkooda.
12 Febraayo, 1994 Ciidamada Itoobiya waxay si waxshinimo ah magaalada Qabridahare ugu dileen guddoomiyihii iyo gudoomiye ku xigeenkii Maxamed Cumar Tube iyo Deeq Maxamud Carab. Waxaa dilka ka sii fool xumaa maydkooda la dhigay badhtanka magaalada iyada oo miltariga Itoobiya diideen in la xabaalo. Arrintan waxay noqotay wax ku cusub taariikhda, kana soo horjeedda xeerarka caalamiga ah iyo garashada caqliga fayow.
12 Febraayo, 1994 Ciidamada Itoobiya waxay magaalada Dhagaxbuur ku dileen Mahad Muuse Ibrahim iyo Marxuum Deeq Yuusuf Kaariye. Deeq wuxuu ahaa qoraagii Joornaalkii la odhan jiray Sheeko & Shaahid.
15 Febraayo, 1994, waxaa la qabtay kalfadhigii baarlamaanka dalka Ogaadeenya. Baarlamaanku waxay ka doodeen mustaqbalka siyaasadeedd ee dalka Ogaadeenya, waxayna cod aqlabiyad leh ku go’aamiyeen in dadwaynaha Soomalida Ogaadeenya laga qaado afti iyaga oo waydiinayo waxa ay rabaan. Go’aanka baarlamaanku wuxuu lahaa muhimad iyo tixgalin gaar ah maadaama baarlamaanku ahaa kii ugu horeeyey taariikhda Ogaadeenya oo shacabku si dimoqraati ah u soo doorteen. Sidoo kale go’aanku wuxuu waafaqsanaa dastuurkii ku meel gaadhka ahaa ee Itoobiya oo sheegayey in ummad walba ay dooran karto aayaheeda marka uu dhamaado waqtiga ku meel gaadhka ah ee dawladdii Itoobiya. Maalintii go’aankan la qaatay waxaa loo aqoonsaday inay noqoto “Maalinta aayo-ka-talinta” ee dalka Ogaadeenya.
17 Febraayo, 1994 waxay Cuqaasha Ogaadeenya Meles Zenawi hortiisa ka taageereen go,aankii Barlamanbka, isaga oo shir Albaabada loo xidhay kula galay magaalada Harar.
Isla badhtamihii Febraayo, 1994, ururkii ONLF, golihiisii dhexe ayaa go’aan aqlabiyad ah ku taageeray go’aankii Baarlamaanka, kuna baaqay in si nabadgalyo ah oo waafaqsan datuurka ku meel gaadhka ah lagu dhameeyo dhibaatada u dhaxaysa Ogaadeenya iyo Itoobiya.
Febraayo 22, 1994, waxaa magaalada Wardheer laga qabanqaabiyey banaanbax lagu taageerayo go’aankii baarlamaanka iyo kii ka dambeeyey ee JWXO ee lagu codasaday in dadwaynaha Soomaalida afti laga qaado. Sidoo kale, waxaa xilligaas ku sugnaa magaalada Wardheer Guddoomiyihii JWXO Sheikh Ibraahim Abdalla oo hadal ka jeedin lahaa bannaanbaxa.
Ciidamada Itoobiya waxaa amar lagu siiyey inay joojiyaan bannaanbaxa isla markaana soo qabtaan Madaxwaynaha JWXO geeri ama nololba. Ciidamada Itoobiya oo ku hubaysan hub culus ayaa soo weeraray wafdigii JWXO oo uu ku jiro Guddoomiyihii. waxayna shacabka reer Wardheer maalintaas si geesinimo iyo wadaninimo ah u difaaceen magacii umadda iyaga oo qab jabiyey ciidamadii xoogga badnaa ee Itoobiya kana horistaagay inay gacanta ku dhigaan Madaxwaynihii Ogadeeniya iyo inay joojiyaan bannaanbixii. Ciidmaada Itoobiya oo adeegsanaya hubka cul-culus, waxay xasuuq u gaysteen dadwaynihii iyaga oo si aan aabo-yeel lahayn u gumaaday shacbigii magaalada. Waxaa maalintaas goobtaas ku geeriyooday 85 ruux oo u badan dad rayid ah.
Dhacdooyinka qaarkood waxay leeyihiin Xusuus Farxadeed qaarkoodna Murugo, marka laga eego xasuuqii loo gaystay dadwaynaha reer Wardheer iyo madaxdii lagu laayey Qabridaharre iyo waliba burburkii dhismayaashii magaalada. Dhinaca kalana waxay mudan yihiin xusuus farxad iyo faan leh, marka laga eego sida dadwaynuhu ugu istaageen xaqooda una qab jabiyeen ciidamdii xoogga badnaa ee Itoobiya ee ay u difaaceen madaxdii iyo magacii umadda. Waxay noqotay arrin lagu faani karo, taariikhdana gashay sidii dadwaynaha reer Wardheer oo aan haysan hub u dhigma kuwii ay wateen Ciidamada Itoobiya ay u difaaceen magaalada iyo madaxdii Jwxo.
Xasuuqii ka dhacay Wardheer Fabraayo 22, 1994 waxaa laga joogaa 28 sanno shacabka Soomaalida Ogadeeniya waxay ku xuseen Maryo Dhiig leh iyaga oo xidhan weer guduudan. Waana la xusi doonaa dhacadadii xanuunka badanayd ee xasuuqii Wardheer inta uu qof ka nool yahay Soomaalida Ogadeeniya.